Indlela yokugcina izinto zokusebenza zokucoca ezinomileyo
Ukulawulwa kwamanzi acocekileyo, imicimbi yokugcina imodaka kufuneka ibe yinkinga yamashishini.Izixhobo ezininzi zokucoca ngokucokisekileyo kunjani? Indlela yokugcina izixhobo zokucoca ezinomileyo, indlela yokupaka iimpahla zokucoca ezomileyo kwimisebenzi yemihla ngemihla, eli nqaku liya kuchaza le mibuzo ikunike uhlalutyo:
Ukujonga isondlo kwansuku zonke ngaphambi kokuvula abacoceli abomileyo.
Okokuqala phambi kombhobho, jonga umatshini wokucoca oomileyo kule mibeko elandelayo
I-gauge ye-filter gauge ibonisa ukuba ngaphantsi kwe-0.1 Mpa;
2. Umncedisi nokuba kukho i-screw free;
3. Zonke iipayipi, iifowuni, iwindi yokujonga ukubona ukuba kuqhutywe, kuqhutywe, kuqhutywe, kuphazamiseka;
4. Imbonakalo yokujonga inkqubela yezempilo;
5. Hlola ukucoceka, umqokeleli weqhosha, ukuhlaziya i-cilia filter, separator-water separator, njl.
Okwesibini ukuvula ukubonwa kogcino:
1. Vula ukutshintsha kwamandla, khangela ukuba zonke iintlobo zokubonisa ziqhelekileyo;
2. Vula i-valve yamanzi okupholisa.
3. Vula i-compressor yomoya, njengengcinezelo ifinyelela kwixabiso elithethiweyo, 0.7 Mpa uze uqale umatshini usebenze.
Ekugqibeleni ekupheleni komsebenzi:
1. Ekupheleni komhla wokusebenza umjikelezo wokugqibela wokuhlamba, qinisekisa ngaphakathi ngaphakathi kwi-distiler dry lotion.
2. Vala ukutshintsha kwamandla, i-valve yokufaka.
3. Umsebenzi ogqityiweyo, vala yonke ivenive yokutshintsha.
Inqaku lokugqibela: Zingaphi ixabiso loshishino lo...
Inqaku elilandelayo: Kufuneka uvule uluphi uhlobo l...